Mitohivakana ny fiarahabana ny filoham-pirenena teo aloha, Marc Ravalomanana, izay milaza ny fahendrena nasehony nanomboka ny 8 janoary teo ka hatramin’izao.
Olon’ny fihavanana ary nisoroka ady sy ra mandriaka, izay raha fehezina no votoatin’ireo fanehoan-kevitra mikasika ity filoham-pirenena teo aloha ity.
Mpanongana lasa filoha
Nohamarinin’ny gazety mpivoaka isan’andro ao frantsa, “La liberation”, indray fa dia mpanongam-panjakana no lasa filoham-pirenena eto Madagasikara. Anisan’ny nahagaga tato ho ato ny fisian’ny tranga toy io taty amin’ireo firenena afrikanina zanatany frantsay.
Kepoka sy lany bala ireo mpanaratsy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana nanoloana iny fihetsika “fair play” nasehony teny amin’ny HCC iny. Hanao toy iny ve ny filoham-pirenena vaovao raha tsy nolaniana teo ?